Faah-Faahinta Xogtii Ugu Dambaysay Ee Heshiisyada Ay Man United Ku Doonayso Edinson Cavani, Ousmane Dembele & Alex Telles - Gool24.Net
Faah-Faahinta Xogtii Ugu Dambaysay Ee Heshiisyada Ay Man United Ku Doonayso Edinson Cavani, Ousmane Dembele & Alex Telles
Kooxda ree England ee Manchester United oo aan suuqa xagaagan wali wixii la filayay ka samayn ayaa wadahadalo kula jirta jumlad ciyaaryahano ah oo laga xusi karo daafaca bidix ee Porto ee Alex Telles, weeraryahankii hore ee PSG ee Edinson Cavani iyo garabka Barcelona ee Ousmane Dembele.
Bar-tilmaameedka koowaad ee Man United markii ay suuqan soo gashay ayaa ahaa Jadon Sancho oo Borussia Dortmund ka tirsan laakiin rajadoodii 20 sano jirkaas ayaa u muuqata mid adag.
Borussia Dortmund ayaa Man United si cadaan ah ugu sheegtay inaysan sinaba kaga tanaasulayn qiimaha 108-da Milyan ee euro ah ee ay qabsatay halka ay Red Devils u gudbiyeen dalab 73 Milyan oo Pound ah oo gaadhi kara 91 Milyan oo Pound.
Haddaba, iyadoo uu suuqa xagaagu xidhmayo Isniinta toddobaadkan ayuu saxafiga xog-ogaalka ah ee Fabrizio Romano ka hadlay wararkii ugu dambeeyay iyo xaalada Cavani, Telles iyo Dembele ee Manchester United.
Aan ku bilawnee Man United ayaan aqbali doonin inay mushahar iyo lacag waali ah siiyo Edinson Cavani iyo wakiilkiisa oo ay wadahadalo kula jiraan, Cavani ayaa mushahar badan doonaya halka lacagta wakiilku ay ahayd wixii ay Benfica ku diiday.
Dhinaca kale Man United ayaan sidoo kale doonayn inay heshiis rasmi ah kula wareegto garabka Barcelona ee Ousmane Dembele oo ay amaah ku doonayaan balse taas bedelkeeda Barcelona ayaa kaliya heshiis rasmi ah inay ku dirto doonaysa.
Ugu dambayn, Red Devils ayaan sidoo kale aqbali doonin inay lacag 25 Milyan oo euro ah ka bixiyaan 27 sano jirka daafaca bidix ee FC Porto ee Telles maadaama kaliya 8 bilood ka hadheen heshiiskiisa oo ay mudadaas kaddib bilaash ku heli karaan.